Seed Co yoshanda nemadzimai | Kwayedza
Seed Co yoshanda nemadzimai
08 Oct, 2020 - 16:10	 2020-10-08T16:43:58+00:00 2020-10-08T16:43:58+00:00 0 Views
Mai Colleen Mhizha vepaPlot 3 North Star (Chipadze) Farm, iri kuShamva vari mumunda wavo wechibage chekudiridzira pandima yakakura mahekita maviri.
Murimisi weSeed Co ari mumunda wegorosi, uyo mbeu yacho yeS C Nduna yakatengwa kukambani inouchika mbeu zvemhando yepamusoro-soro iyo yakarimwa nenguva naMai Mhizha. Apa murimisi airatidza kukosha kweshizha rekumusoro rinodaidzwa pachirungu kuti flag leaf.
Murimisi Rabson Musimudziwa achibatsirana naMai Colleen Mhizha kuongorora dambudziko regonye reFall Army Worm (FAW) range richangopinda mumbesa. Apa gonye iri rainge richiri duku, riine musoro mutema, rinova zera risinganetsi kuuraya nemishonga. Vakabva vangomwaya mushonga weLambda rikabva rangofa.